Yakakurudzira dzeSpanish mhosva dzenhau, dzinonyanya kuverengerwa nekuombera | Zvazvino Zvinyorwa
Yakakurudzira yekuSpanish mhosva dzenhau
Kana mushandisi weInternet achitsvaga "inokurudzirwa yekuSpanish mhosva inoverengeka", mhedzisiro inonongedza kune vanyori vakaita saEva García Sáenz de Urturi kana Dolores Redondo. Pamwe chete navo, pane mazita akaisa matarenda mumhando iyi, saAntonio Mecerro naCarmen Mola, pakati pevamwe.
Ivo vese vakagadzira akakosha kwazvo mazita kubva kune yekutengesa maonero. Kunze kwenhamba dzinoshamisa dzekunyora, dzakawanda dzenyaya dzake dzechitikitivha dzakabudirira kuita firimu. uye kuterevhizheni. Naizvozvo, mucherechedzo wekuti ivo vachasiya mukati medzidziso yazvino yeSpain iri kungotanga kuonekwa.
1 Yakakurudzira yekuSpanish mhosva dzenhau
1.1 Baztán Trilogy, naDolores Redondo
1.1.1 Iyo isingaonekwe muchengeti (2013)
1.1.2 Nhaka muMapfupa (2013)
1.1.3 Kupa kuDutu (2014)
1.2 Runyararo rweGuta Dzvuku (2016), naEva García Sáenz de Urturi
1.2.1 Iwo maRites eMvura (2017)
1.2.2 Nguva Yekutenda (2018)
1.3 Mhosva yevakafa vakadzi vechiJapan (2018), naAntonio Mercero
1.4 Iyo gypsy mwenga (2019), naCarmen Mola
Baztán trilogyNaDolores Redondo
Iyo inyanzvi yemunyori weBasque Dolores Redondo Meira ane mabhuku matatu akaiswa mumumvuri unovharika mudunhu raakabva. Ikoko, iwo mareferenzi engano uye ngano dzemupata weBaztán akakosha pakugadzirisa humhondi. Kuenda munhoroondo, kupatsanurana pakati pekugona uye kunakidza kweimwe zviitiko hakunyatso kuoneka.
Redondo inogadzira iyi "kuvhiringidzika" muverengi kuburikidza nehurongwa hwakanyanya kupinza uye tsananguro dzakatsanangurika dzeongororo dzemapurisa. Izvi zviripo nenzira yechokwadi chaizvo mhosva dzinofanirwa kugadziriswa neanopenga muongorori Amaia Salazar, protagonist.
Muchengeti asingaoneki (2013)
Unogona kutenga bhuku pano: Muchengeti asingaoneki
Salazar anotora matanho kana zviremera zvikaziviswa nezvekuwanikwa kwemuviri usina hupenyu wewechidiki mukati mahombekombe erwizi rweBaztán. Umhondi ihwohwu hunoratidzika kunge hune hukama nehumwe hwakaitika mwedzi wapfuura munzvimbo imwechete uye pasi pemamiriro ezvinhu akafanana (miviri isina kupfeka yakasara munzvimbo isinganzwisisike).
Kugadzirisa nyaya yacho, Salazar anofanira kubata nezviyeuchidzo zvenguva yake yadarika yekutambudzika uye otarisana nematanho ezviitiko zvinoita kunge zvakajairika. Mumwe wavo ndiBasajaun, munhu wengano anotaurwa nezvake mukufa kwevasikana. Nechikonzero ichi, iye pakupedzisira anoda rubatsiro rwehanzvadzi dzake Flora naRos, pamwe natete Engrasi (nyanzvi mune zvemashiripiti).
Nhaka mumapfupa (2013)
Unogona kutenga bhuku pano: Nhaka mumapfupa
Chikamu chechipiri cheiyo Baztán trilogy inosimbisa kwakawanda kwekufungidzira kwakasimudzwa mukati Muchengeti asingaoneki. Kutanga, zviratidzo zvitsva zvinoonekwa nezvehunhu husina kujairika hwababa (mune ndangariro) dzemuongorori. Kune zvekare kuwedzera kuri pachena kwesimba rakaenzana rakatenderedza Amaia, uyo achangova amai vatsva.
Asi hapana nguva yekuzvibata munyoro wemwana wako. Salazar anofanirwa kugadzirisa nyaya nyowani inoratidzirwa nehutsinye hwemutadzi anozviti Tarttalo, rudzi rwevanyoro, vanoteura ropa uye vane hutsinye cyclops. In consecuense, mamiriro acho anowedzera kudzvinyirira pakati pematambudziko ezvakaitika zvekare nezvakavanzika zvine njodzi zvazvino.
Kupa dutu (2014)
Unogona kutenga bhuku pano: Kupa dutu
Muchikamu chechitatu chetatu, chinhu chakabatanidzwa ndiInguma, dhimoni rinosveta hupenyu kubva muvana vacheche nemweya wake Nekudaro - semavhoriyamu akafanotangira - iye anokonzera kufa murume wenyama neropa.
Kune ruzhinji rwevatsoropodzi nevanyori, Kupa dutu Ndiko kupedzisa kubata kweiyo trilogy. Chikonzero chakakunda: kusagadzikana kusingaperi kwerondedzero kunowedzerwa nekuvharwa kwakakwana kwedenderedzwa revanyori. Panguva ino, Dolores Redondo akapa imwe yenhengo dzesaga nekudzika kunoshamisa uye hunhu.
Kunyarara kweguta jena (2016), naEva García Sáenz de Urturi
Kunyarara kweguta jena.
Unogona kutenga bhuku pano: Kunyarara kweguta jena
Chikamu chekutanga che trilogy yeguta chena yakashatisa Sáenz de Urturi mukati meiyo genera remazuvano mhosva yekuSpain mhosva.. Kwete pasina, Kunyarara kweguta jena yakaunzwa kugirazi hombe mu2019 pasi pekutungamira kwaDaniel Calparsoro. Iye protagonist wenyaya dzese dzakateedzana ndeyekusingaperi Inspector Unai López Ayala (aka "Kraken", nekuda kwekuonekwa kwake kunoshamisa).
Pamwe chete nemuongorori ane zita remadunhurirwa rekuti cephalopod, mubatsiri wake akatendeka Estíbaliz naCommissioner Alba vanopinda mujaho wakanangana nenguva yekugadzirisa nekutarisira mhosva dzinokanganisa dzakaitika muVitoria. Neichi chikonzero, López - nyanzvi yekutsanangudza matsotsi - haazeze kushandisa nzira dzisingabvumirwe (uye kunyange zvine mutsika) nzira dzekuita basa rake.
Iyo mvura inogadzirira (2017)
In the rechipiri bhuku re trilogy, mutadzi anotevera tsoka dzetsika yechienzi yemadzitateguru inosanganisira vakadzi vane nhumbu. Ipapo, López anotora nyaya yacho pachezvake paanoonekwa nhumbu yekutanga, uyo anga ari musikana wake wekutanga. Saizvozvo, Commissioner Alba arimowo mamiriro (Unai anogona kuve baba), saka, anogona kuve chinangwa chemhondi.
Iwo madzishe enguva (2018)
Unogona kutenga bhuku pano: Iwo madzishe enguva
Pane ino nguva, vaongorori vanofanirwa kutsvaga humbowo munguva mbiri dzakasiyana. Kune rimwe divi, zviyeuchidzo kurufu rwunoratidzwa mune yekare medu inova neimwe mhando yekubatana nehumhondi hwazvino. Kune rimwe divi, Alba naUnai vanofanirwa kugadzirisa mibvunzo nezve mararamiro avo, hukama hwavo neramangwana remhuri yavo.
Nyaya yevakafa vakadzi vechiJapan (2018), naAntonio Mercero
Nyaya yemadzimai eJapan akafa.
Unogona kutenga bhuku pano: Nyaya yevakafa vakadzi vechiJapan
Nyaya yemaJapan Muertas chikamu chechipiri muSofía Luna dzakateedzana. Iri bhuku rinopinda mukati memakakatanwa emukati, eruzhinji uye emhuri ehunhu mukuru akarererwa mukati Kupera kwemunhu, iyo yakatangira vhoriyamu. Zviripachena, kuvhiyiwa pabonde zvakare kweiyo protagonist -Carlos inonyatso shandurwa kuita Sofía- chiitiko chisina kumboitika mumutikitivha mhando.
Kunze kwekushamisa kunoshamisa kwataurwa, zano rebhuku iri rinokurumidza kukochekera muverengi uye rinokonzeresa kufungisisa. Icho chikonzero: iyo mhondi inorwisa boka revashanyi veJapan nekuvenga hupombwe. Nechikonzero ichi, Luna anofanirwa kuvimba nemushanduri anonyumwira kana tarisiro yeruzhinji ichiwedzera nekuda kwekushaikwa kwemwanasikana wemumiriri weJapan.
Mwenga wechiGypsy (2019), naCarmen Mola
Unogona kutenga bhuku pano: Mwenga wechiGypsy
Inspector Elena Blanco vanotora nyaya yaSusana Macaya, akawanikwa akafa mazuva maviri mushure mekupemberera bato rake re bachelorette. Iyo occisa yaive nevabereki vechiGypsy, kunyange iye akarererwa munharaunda yemazuva ano. Zvimwechetezvo, kufa kwacho kunoita sekune hukama neiyo yakaitika makore manomwe apfuura (iya yehanzvadzi, Lara Macaya), sezvo iwo iwo macabre rite yakateverwa mune ese ari maviri.
Kunyangwe mhondi yaLara yakawanikwa ikaiswa mutirongo, kufa kwaSusana kunosiya kusahadzika pachikwata chose chemapurisa. Iye murume akapiwa mhosva haana mhosva ... kana mumwe munhu ari kudzokorora modus operandi yake? Mukufananidza, Blanca anoedza kunzwisisa kutenderera kwehupenyu hwevamwe ma gypsi avo vakaramba tsika dzavo.. Pamusoro pezvo, ane refu-rakamira risina kugadziriswa kesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Yakakurudzira yekuSpanish mhosva dzenhau
Martín Casariego. Kubvunzana nemunyori we Ini fodya kukanganwa kuti unonwa